ကနေဒါနိုင်ငံတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု ၁.၃၅ သန်းကျော်ရှိလာ - Xinhua News Agency
ကနေဒါနိုင်ငံ အွန်တေးရီးယိုးပြည်နယ် တိုရွန်တိုမြို့ရှိ လမ်းပေါ်တွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်၍ သွားလာနေသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အော့တဝါ၊ မေ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကနေဒါနိုင်ငံ၌ မေ ၂၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းအထိ COVID-19 ထပ်မံကူးစက်ခံရသူ ၃,၃၄၆ ဦးရှိပြီး၊ စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၂၅,၁၅၂ ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်းရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၁,၃၅၀,၇၈၅ ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း CTV သတင်းအရ သိရသည်။
COVID-19 ကူးစက်ခံရမှုသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၌ တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလျက်ရှိကာ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက နေ့စဉ်ဆေးရုံ၌ကုသမှုခံယူသည့် အရေအတွက်သည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ကနေဒါပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အေဂျင်စီ (PHAC)က မေ ၂၁ ရက်တွင်ပြောသည်။
ဆေးရုံတက်နေရသူများထဲမှ ပျမ်းမျှ ၁,၃၀၀ ကျော်မှာ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်၌ ကုသနေရကာ ယင်းမှာ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပျမ်းမျှသေဆုံးမှုမှာ ၄၁ ဦးရှိပြီး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နေ့စဉ် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
“ပြီးခဲ့သော ၇ ရက်အတွင်း နေ့စဉ်ရောဂါကူးစက်မှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျဆင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်’’ ဟု PHAC ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
“ဒါပေမယ့် လာမယ့်ပိတ်ရက်ရှည်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့ အားလပ်ရက်နောက်ပိုင်း ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်လာခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်” ဟု အေဂျင်စီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
COVID-19 ကူးစက်မှုလျော့ကျသွားခြင်းကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်အချို့အား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကနေဒါ၏ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည့် အွန်တေးရီးယိုးပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ ၁၄ သန်းရှိပြီး ပြင်ပအပန်းဖြေနေရာများအား မေ ၂၂ ရက်တွင် ကန့်သတ်ချက်အချို့ချမှတ်ကာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပြင်ပတွေ့ဆုံပွဲများတွင် လူ ၅ ဦးအထိ စုရုံးခွင့်ကို ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အွန်တေးရီးယိုးပြည်နယ်သည် ဇွန်လလယ်မှစတင်ကာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှုန်းနှင့်အခြားကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကန့်သတ်ချက်များကို ဖယ်ရှားပေးမည့် အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သော ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးအစီအစဉ်ကို မေ ၂၀ ရက်တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
လက်ရှိကျန်းမာရေး အစီအမံများကြောင့် အွန်တေးရီးယိုးပြည်နယ်တွင် ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု တိုးတက်လာသဖြင့် အဆိုပါအစီအစဉ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အွန်တေးရီးယိုးပြည်နယ်တွင် အချို့ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသစ်ကြေညာထားသော ပြောင်းလဲမှုများမှအပ လက်ရှိ ချမှတ်ထားသော မိမိနေအိမ်တွင် နေထိုင်ရန် ညွှန်ကြားချက်သည် ဇွန်လ ၂ ရက် အထိ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Canada’s COVID-19 cases surpass 1.35 mln
OTTAWA, May 21 (Xinhua) — Canada reported 3,346 new cases of COVID-19 as of Friday afternoon, bringing the cumulative total to 1,350,785, including 25,152 deaths, according to CTV.
The COVID-19 activity is steadily declining in Canada. Compared to last week, there has beena10 percent decrease in the number of people with COVID-19 being treated in hospitals each day, foradaily average of under 3,500, according to the Public Health Agency of Canada (PHAC) on Friday.
Of the hospitalized, on average just over 1,300 were being treated in intensive care units, which is down four percent and an average of 41 deaths, down 15 percent, were reported daily.
“Over the past seven days, we’ve seenamore than 25 percent decrease in daily cases withacurrent average of just over 5,000 new cases being reported daily,” PHAC said inastatement.
“But with the long weekend coming, we’ll need to maintain precautions to sustain our progress and avoidapost-holiday spike,” added the agency.
Some Canadian provinces are taking tentative steps toward reopening amidadecline in COVID-19 cases.
In Ontario, which is Canada’s most populous province withapopulation of 14 million, outdoor recreational facilities will reopen with some restrictions on Saturday as outdoor gatherings of up to five people will be allowed again. On Thursday, the province announcedathree-step reopening plan that will lift public health restrictions based on vaccination rates and other health indicators starting in mid-June.
The plan came as the province’s control over the pandemic is improving due to current health measures.
The current stay-at-home order in the province will remain in place until June 2, with the exception of those newly announced changes to some outdoor activities. Enditem
Photo-People wearing face masks walk onastreet in Toronto, Ontario, Canada, on Jan. 16, 2021.(Photo by Zou Zheng/Xinhua)